qayb kalee iyo Xasuus Reebkii Cali Sigad – Xeernews24
qayb kalee iyo Xasuus Reebkii Cali Sigad
26. Juni 2018 /in Qormooyin/Articles /von admin
Xasuusin ku saabsan Go’aankii 3da Magaalo ee Cadeytu, Cundhufo iyo Gadhmalu loogu daray Deegaanka Canfarta Waxaan xasuusanaa Xilligii Hoggaaminta TPLF iyaga oo la kaashanaysa ;
iyo Rashiid Jaamac,
ay go’aamiyeen in saddexda Magaalo ee Soomaaliyeed si xaqdaro ah loogu daro deegaanka canfarta kadib in ay yimaadeen Magaalada Diridhabe islamarkaana Ugaaska sharafta leh ee Beesha Ciise oo fadhigiisu yahay Diridhabe iyo Hoggaaminta Diridhabe ay ku dhaheen inagu taageera go’aankaas balse ay ka diideen Ugaaska iyo Hoggaaminta Diridhabe oo ay horeeyaan Mudane Aadan faarax iyo Ibraahin Cusmaan .
Dadaaal ballaadhan kadib waxaa tashatay Hoggaaminta iyagu u damqanaya Shacabka, waxayna islagarteen mar haddii ay sheegteen awood oo ay hab aan waafaqsaneyn Dastuurka wadanka 3da Magaalo ee cadeytu, Cundhufo iyo gadhmalo ugu dareen Deegaanka canfarta illaa inta Dawlad cadaalad ku shaqeysa dalka ka dhalaneyso bal aanu Deegaanka Canfarta wax uga soo ridno si aynan shacabkaas u dhibaatoon. Sidoo kale, waxay diyariyeen Hoggaamintaas ay Aadan Faarax iyo Ibraahin Cusmaan ka midka ahaayeen Qoraal ka turjumaya sidii Xuquuda Shacabkaas ku dhaqana 3da magaalo ee dhinaca Bulsho dhaqaale iyo dhinaca siyaasiyeedba loo sugi laha. Waxaana ka mid ahaa Qodobadaas
1. In ay shacabka 3da magaalo ku dhaqan iskood isku maamulaan oo ay yeehshaan hay’adaha sharci dejinta, sharci fulinta iyo garsoorka,
2. In Shacabka ku dhaqan 3da magaalo Luqadooda hooyo oo ah af soomali wax ku bartaan,
3. Xafiisyada iyo Maxkamadaha 3da Magaalo in ay ku shaqeeyan Af Soomaali,
4. In golaha Xildhibaanada iyo Maamulda heer gobol iyo heer deegaan ee canfarta laga qeybgaliyo ama saami laga siiyo wakiilada 3da Magaalo,
5. Miiisaaniyada lagu fulinayo Hawlaha horumarineed iyo kuwa maamulka suuban ee 3da Magaalo in uu Deegaanka Canfartu u qoondeeyo,
6. In dawladda Deegaanka Soomaalidu ka caawiyo 3da magaalo dhinaca Tababarka macalimiinta Dugsiyada,
7. In Dawladda Federaalku dabagal ku sameyso hirgalinta Qodobadaas islamarkaana 3da Magaalo ka caawiso dhinaca Horumarka gaarahaan dhinaca Biyaha, Caafimaadka, Waxbarashada, iwm.
Kadibna Qoraalkii qodobadaas lagu xusay waxa loo gudbiyey Dawladda Federaalka islamarkiiba waxaa qodobadii lagu daray heshiis ay Dalwaddu diyaarisay oo ku saabsanaa nabadeynta agagaarka 3da Magaalo, muddo kadibna waxaa shir lagu qabtay Awash waxaana tii oo la adeegsanayo xafiiska raysalwasaaraha loo yeedhay loona sheegay in laga wadaxaajoonayo xuquuqda ay shacabkaas yeelanayaan Mudane Aadan Faarax iyo Dr. Cumar Xaaji Carab oo iyagu kasoo horjeeday go’aankaas cadaalad darada ah.
Ugudanbeyntiina, maadaama Mudane Aadan Faarax iyo Dr. Cumar Xaaji Carab ay dood adag ka dhiibteen ilaalinta xuquuqda Shacabka 3da Magaalo, waxaa lagu yidhi waa in aad saxeexdaan heshiiskaa haddii kale wixi ka dhaca 3daas magaalo idinka ayaa ka mas’uul noqon doona. Waxaa sidoo kale lagu eedeeyey in ay iyaga oo la kaashanaya Ugaas Mustafe Maxamed shacabka Soomaliyeed Dawladda ku kiciyeen oo lala xisaabtami doono. Falanqeyn ballaadhan kadib ayaa waxaa la isla gartay in shacabka lagu badbaadiyo heshiiskaas illaa iyo inta Hoggaamin daacad ah oo ay ka go’anatahay hirgalinta Dastuurka dalka la helayo maadaama lawada garanayo intay iskudhacyo gacankusameys ah abuuraan kadibna odhan doonaan hebel iyo hebel ayaa ka danbeeyey islamarkaana ku waxyeeleeyaan muwaadiniinta shacabkooda u halgamaya.
Haddaba, waxaa lagama maarmaan ah in la qiimeeyo waxa ka fulay iyo waxa aan ka fulin qodobadii heshiiskaas, iyo waxa sabab u ah islamarkaana waxaa loo baahanyahay in laga wada xaajoodo sidii xal waara oo dastuurka wadanka waafaqsan oo nabadgalyada iyo walaatinimada labada shacab ee wlaalaha ah sii adkeynaya. Waxaanan ku rajoweynahay inuu Ray’salwasaare Dr Abiy Axmed arintaas fiiro gaar ah siin doono .
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/03/xog-muhiim-ah.jpg 201 251 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2018-06-26 20:30:102018-06-26 20:30:10qayb kalee iyo Xasuus Reebkii Cali Sigad
Wafdi Heer sare ah oo ka socda dalka Eritrea oo si diirran loogu soo dhoweeyay... Kooxdii ka dambeysay Qaraxii lala eegtay R/wasaaraha itoobiya Abiy Axmed oo...